Onye ọrụ Guide nke Wondershare SafeEraser maka Mac
Ẹkedori SAFEERASER IHE Mac
Doo anya ratụ ratụ faịlụ
Mpikota onu Foto
Ihichapu onwe data
Ihichapu ehichapụ faịlụ
Ihichapu niile data
Download, wụnye na-agba ọsọ Wondershare SafeEraser maka Mac na gị iMac, MacBook Pro ma ọ bụ MacBook Air. Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka na gị Mac. Ị pụrụ ịhụ ihe omume ga-chọpụta ngwaọrụ gị-akpaghị aka.
Mgbe ngwaọrụ gị achọpụtara, ị pụrụ ịhụ ya ọmụma na window.
Nzọụkwụ 1. Pịa "Express nzacha na mkpocha" ke hapụrụ sidebar. Site window na nri, ị ga-ahụ otú ọtụtụ ụbọchị agafeela kemgbe oge ikpeazụ gị kpochara ngwaọrụ gị na ole ohere e agbapụtawo.
Nzọụkwụ 2. Pịa "Malite" button na ala n'aka nri ka iṅomi ngwaọrụ gị maka junk faịlụ. Mgbe Doppler-agwụ agwụ, ngụkọta ego nke junk faịlụ na egosiri na ego ọ bụla ụdị junk faịlụ na egosiri kwa.
Ị nwere ike pịa nọmba ka lelee nkọwa maka ọ bụla ụdị nke junk faịlụ karị.
Nzọụkwụ 3. Tulee achọghị junk faịlụ na ụdị na pịa "Ihichapu ugbu a" ọcha junk faịlụ site na gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka. Mgbe ahụ, na a ọhụrụ mmapụta window, nzacha na mkpocha N'ihi ga-egosipụta.
Site ekpocha junk faịlụ, ị ga-azọpụta ohere na ngwaọrụ gị maka ọhụrụ ngwa ọdịnala na ihe ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 1. Click "Photo Compressor" ke hapụrụ sidebar. Pịa "Malite iṅomi" ka usoro ihe omume iṅomi gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod maka nnukwu photos na Photo Compressor window. Ọ na-ewe sekọnd ole na ole ịrụcha iṅomi.
Nzọụkwụ 2. Mgbe Doppler, niile nnukwu photos ga-egosipụta na window. Na site na window, ị pụrụ ịhụ na otú ihe ohere ị na-aga ịzọpụta site compressing a niile photos. Ego photos ị chọrọ mpikota onu.
Na nke a Doppler N'ihi window, ị pụrụ ịhụ "ndabere ụzọ". Ọ bụ ebe ebe gị niile mbụ foto a ga-azọpụta (tupu compressing gị niile nnukwu photos, SafeEraser ga-eme ka ndabere maka ị bụrụ na ị chọrọ ka ha na-eme n'ọdịnihu). Ị nwere ike pịa ya hazie gị ala ebe ịzọpụta foto gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka.
Nzọụkwụ 3. Pịa "mpikota onu ugbu a" ka Wondershare SafeEraser mpikota onu foto na ngwaọrụ gị maka gị. Ọ na-dịruru sekọnd ole na ole. Na N'ihi window, ị ga-esi otú ihe ohere ị na-na na-azọpụta site compressing photos na ole ohere hapụrụ n'ihi na ugbu a photos.
Mgbe nchegbu banyere àgwà nke abịakọrọ photos. E nwere ọ bụghị ihe dị iche n'etiti mbụ foto na abịakọrọ otu anya.
Nzọụkwụ 1. Pịa "ihichapu Private Data" ke hapụrụ sidebar. Na window na nri, ị pụrụ ịhụ ihe ụdị faịlụ nwere ike ehichapu ya.
Nzọụkwụ 2. Pịa "Malite" button nyochaa na ike iṅomi na onwe data na gị iDevice.
Nzọụkwụ 3. Mgbe iṅomi na dechara, niile onwe data na-depụtara. Ị nwere ike ịlele ha ele nkọwa.
Nzọụkwụ 4. Tulee achọghị data na pịa "Ihichapu ugbu a." Na ozugbo, pịnye okwu "Hichapụ" n'ịkwado nhichapụ.
Na ị na-atụ aro ihichapu onwe data mgbe nile ọ bụrụ na ị na-eche banyere nzuzo gị na ọmụma nchekwa
Nzọụkwụ 1. Pịa "ihichapu ehichapụ faịlụ" ke hapụrụ sidebar.
Nzọụkwụ 2. Pịa "Malite" button ka iṅomi maka ehichapụ faịlụ.
Mgbe iṅomi na-okokụre, ị pụrụ ịhụ na-ehichapụ faịlụ na-ota n'ime udi. Lelee kwekọrọ ekwekọ faịlụ ụdị ịhụ nkọwa ..
Nzọụkwụ 3. Tulee faịlụ na ị chọrọ iji wepụ na-adịgide adịgide site na ngwaọrụ gị na pịa "Ihichapu ugbu a." Na ozugbo, pịnye okwu "Hichapụ" n'ịkwado nhichapụ.
Cheta na: n'oge usoro, na-ehichapụ faịlụ nke na ị na kwadoo gị iTunes ga-ehichapu, huu data bụ unrecoverable site iTunes n'ọdịnihu.
Nzọụkwụ 1. Pịa "Ihichapu All Data" ke hapụrụ kọlụm. Pịnye "Hichapụ" na igbe n'ịkwado nhichapụ na pịa "Malite".
Nzọụkwụ 2. Na window ị ga-ahụ nhichapụ amalite. All data na gị iDevice ga-ewepụ.
Nzọụkwụ 3. Ozugbo nhichapụ na-agwụ agwụ, na window nke usoro ihe omume uche anya ka screenshot n'okpuru.